Kubhekiselwa okokuqala ebhaliwe into ezifana naemnichestvo libhekisela IV ekhulwini BC. e. Ngokusobala, abantu iqhaza zinqobe ngakolunye uhlangothi noma omunye kuphela inzuzo, babephambi. Naphezu kwazo zonke lezo impumelelo neyobuntu lesintu, banayo namuhla. Ngaphezu kwalokho, ngaleso sikhathi kukhona izinkampani eziningana lempi wahlanganyela supply Amasosha, edume kakhulu lapho - Blackwater (okwamanje Academi) - edalwe 'ngophawu' Erik Prince.
Erik Prince wazalwa ngo-June 6, 1969 edolobheni elincane eHolland , eMichigan. Uyise, u-Edgar nomkakhe u-Elsa ngaleso sikhathi nginezingane ezintathu kakade. Prince umndeni ezizukulwane eziningana washumayela pravohristianskie ukubukwa.
Uyise inkosi yangesikhathi esizayo yakwa Amasosha waqala ukuphuma njengoba umdayisi, ethola 40 kuphela amasenti ihora. Through ukuphikelela nokuthembela umsebenzi onzima, uye zanqwabelana lemali edingekayo, futhi ngo-1965 wasungula inkampani okwenza machines ongaphakeme tide coachwork Prince Machine Corporation. Ngokushesha usomabhizinisi usethe ukukhiqizwa nezinye izingxenye. Lokhu kwenza ukuba u-Edgar Prins sandise ibhizinisi yayo esikhathini esifishane ukuletha inzuzo ukuze izinombolo eziyisithupha. Nokho, kwakungekhona umkhawulo, futhi ngokushesha umndeni wayevele inethiwekhi izinkampani kanye ingcebo izindleko isamba $ 1 billion.
Ngo-1970 ekuseni, inkampani Edgar Prince sika lobunikazi ilanga visor futhi kuye kwathengwa amakhophi 5,000 General Motors. Eminyakeni 90, ukukhiqizwa kwe ezifana imikhiqizo amabhizinisi of inkampani amayunithi 20 000. ngosuku. Ngaphezu kwalokho, ngo-1980 ngenxa somshado udadewabo Eric Scion we omunye ezinethonya kunazo "Republican" kwamaqembu US umndeni Prince usezuze uxhumano kuyadingeka ukuze isimo kwezombusazwe wezwe.
Ngakho, u-Erik Prince wakhulela emndenini ocebile kakhulu. Phela, uyise wasebenza njalo omdala owakhileyo wesine Holland lwakubo. Nokho, umndeni wakhe kwadingeka isiko oqinile samaPuritan ka enquma ukugcina izingane zaba namandla kakhulu. akuthandayo uyise ukuhamba nomkhaya wakhe. Bahamba ndawonye emhlabeni. Nengane Erik Prince saya eJalimane, lapho wavakashela ekamu lokuhlushwa eDachau, kanye West Berlin. Ngokusho unina, uhambo kwaba nethonya elikhulu ku-le nsizwa, kusale uphawu ongenakucimeka wokulingwa on umphefumulo wakhe.
Ngiseyingane, Erik Prince (usuku lokuzalwa: Juni 6, 1969) ukuwo isikole yobuKristu. Ngemva kokuqedwa kwalo, wangena United States Naval Academy, waphinde wavakashela 3 imigomo. Nokho, maduze nje ukuzithiba ukuze ezazikhona kule nyuvesi, ekhathele, futhi ngo-1992, insizwa yimbe idluliselwe Faculty of Economics Hillsdeylskogo ekolishi. Parallel ezifundweni zakhe Erik Prins, isithombe zazo kuboniswe esihlokweni wakhonza njengephayona sokuzithandela izicishamlilo kanye abatshuzi ngoba Hillsdale County Sheriff.
Ngo-1990, i-Prince baba intern e-White House ngaphansi Dzhordzhe Bushe - abaphezulu. Nokho, ngokushesha waqala ukusebenza nge lephalamende waseCalifornia, lesiShaya Dan Rohrabaherom, a speechwriter weqembu, uMengameli uRonald Reagan. Igobolondo entsha adunyiswe Eric ngokuthi 'insizwa elikhanyayo. " Lapho ngineminyaka engu-21, Prince ngokuzithandela waya ukucinga mass amathuna nezitha umbuso Daniel Ortega, futhi kamuva wenza umbiko ukuthi wakwazi ukuthola kwabo.
Ngemva ekolishi, Erik Prince, omsebenzi wakhe okwamanje ihlobene Logistics nokuvikeleka China sika, wathola iziqu esikoleni isikhulu yohlolwayo ngo-1992 wamiswa njengombonisi isikhulu e-US Naval imikhumbi.
Waba "ulwandle ingonyama" futhi njengengxenye squad 8th nengxenye nokwamasosha eHaiti, eMpumalanga Ephakathi aseBalkan. Esikhathini esiyiminyaka enkonzo njengophawu ingxenye American amabutho ezikhethekile Erik Prins wahlangana amaqhawe amaningi anamandla, kamuva owaba wabasizi bakhe abaqotho, nozakwabo. Ngo ibhuku ngempilo yakhe ibonisa ukuthi isidingo semfundo ukuqeqeshwa izikhungo oyimfihlo ukuqeqeshwa kwemisebenzi elikhethekile, wabona ngesikhathi izimpi zaseYugoslavia ekuqaleni kwama-1990.
Ngo-1995, kwashona ubaba wakhe u-Erika Prinsa. Ukusebenza amahora ayishumi nesithupha ngosuku, kuhlanganise ngezimpelasonto namaholidi kule minyaka 2 emashumini, akuzona indlela engcono kakhulu abathintekayo impilo usomabhizinisi Bani ezibulala ngomsebenzi, futhi inhliziyo yakhe wayesekhathele. Eric wesulile esikhundleni sakhe, futhi kwathatha ukulawula ibhizinisi lomkhaya. Wayesebenza ngokuzikhandla, kodwana msinyana ngemva unina wanquma ukuthengisa Prince Machine Corporation.
Umnikazi omusha we inkampani inkampani Kulawula Johnson, okuyinto ikhokhwe uNkk Prince $ 1.35 billion ngonyaka imali. Njengoba abasebenzi abaningi Sasisebenza enkampanini kayise Eric kusukela yaqala, kwinkontileka ukuthenga / ukudayisa equkethwe umushwana ukuthi abasebenzi ubudala akufanele kuthathwe ku eyi-10 ezayo. Nokho, njengoba ngokuvamile kwenzeka, umnikazi omusha ngokushesha wenza nokwehlisa 2/3 usizo kwezinye izisebenzi futhi ushintshe igama lenkampani, kodwa wathembisa ukuthi ukushiya zinjalo. Ingxenye imali etholwe ukudayisa ibhizinisi lomndeni, waya Eric, oye banquma ukutshala i ibhizinisi engavamile.
Ukudalwa inkampani Blackwater Emhlabeni wonke
Erik Prince, ogama Umlando womuntu ophilako ebusheni bakhe bokuqala wazi, bathuthela Virginia Beach ngo-1997. Kube wasungula isikole ibandulo labaSebenzi Blackwater Emhlabeni wonke Special Operations. Ngenxa yale njongo, Prince pre wathenga 6000 amahektare amaningi endawo eduze emaxhaphozini Omkhulu Deep yaseNyakatho Carolina. Mangisho ukuthi izikhulu zedolobha futhi izakhamuzi zakhona ekuqaleni akathandanga umbono yokudala landfill paramilitary eziseduze kwemizi yabo. Nokho, Prins wakwazi ubabonisa ukuthi entsha ukuqeqeshwa isikhungo uyokhonza ukuchuma Virginia Beach.
Ngasekupheleni kuka-1998, Blackwater base Emhlabeni wonke kwadingeka amagumbi eziningana, ngaphezu emakilasini kweshumi izifundo ze-theory, esitolo, izindawo ukhululekile ehlezi, igumbi lokudlela, arsenal ekamelweni ehlukile yokuhlanza izikhali, kanye amakamelo ne-TV satellite, beze VIP-izivakashi, ngubani yanquma kudlule "ukuqeqeshwa okuyisisekelo." Ngawo lowo nyaka inkampani uhlelekile futhi kwenziwe insimu yalo mncintiswano sokudubula Shoot nganoma BW. It ubuhanjelwe yilabo abamele wama-ejensi akatelela ngomthetho US amayunithi lempi.
Kamuva, Prince seyibhalisile ngokuphindaphindiwe ukuthi Blackwater Emhlabeni wonke wadala inkampani ngoba ngalo ukuqothulwa kohlanga eRwanda ngo-1994. Ngokusho kwakhe, kwenzekani lapho, ke ngempela ukhathazwa, futhi wayeqaphela ukuthi akakwazanga ukuhlala izandla nishumayele. Ekuqaleni, iSikhulu isinyathelo kuphela njengendlela "isikhwama" kwenkampani entsha, futhi zonke izinhlelo athuthukile E Clark, ngubani ngaphambi kokuthuthela Virginia Beach iminyaka engu-11 waba uthisha ku nokusebenzisa izibhamu unit "ulwandle ingonyama".
Imisebenzi inkampani "Blackwater"
Ukusungulwa kweziGungu inkampani kwaqondana inkampani Prince sika ukunciphisa US Department of Defence imali, umqalisi okwakunzima dik Cheyni. Ngo lonke ibutho Logistics imisebenzi yakhe ukuhlela, njengoba ungahlobene nalo muntu ukuqondisa ukulwa imisebenzi, kwakufanele kufanele idluliselwe ezimbonini ezizimele. Endaweni yokuqala ngawalahla wezempi nomnyango ukuqeqeshwa lezisekelo, phakathi okwakukhona ngokungagwegwesi yisikhathi, kuhlanganise eyakhelwe phakathi Second neMpi Yezwe.
Ngakho, ukuvela yangasese sokuqeqeshwa, ifakwe imishini yesimanje kunazo, yayifike ngesikhathi, kanye nezinsiza inkampani "Blackwater" ngokushesha kwaduma. Emkhatsini wa-1997 na-2010 inkampani wathola US Prince sika $ 2 billion ngonyaka nezinkontileka zikahulumeni njengomthombo wokulondeka. Nge angaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezingu-1.6-euro izivumelwano Akuhleliwe federal, ulwazi mayelana nokuthi iziphi imfihlo futhi ngeke avezwe.
Ngaphezu kwalokho, kusukela 2001 kuya 2010, Central Intelligence Agency idlulisele inkampani "Blackwater" $ 600 million. On eyishumi yokuqala ngemva isisekelo salo kwaba brainchild of Prince elikhulu ezintathu nokuvikeleka amafemu eyimfihlo uMnyango United States of State, ukuqinisekisa ukuthi i-US asemazweni lezisekelo lempi wamisa phesheya, onogada 987.
Kwaphela iminyaka eminingi ekamu ukuqeqeshwa Prince yayilungiselela amaphoyisa e-Virginia kanye North Carolina. Kukhona ngisho weza abameleli seminyango komthetho kusukela engumakhelwane Canada. Ngaphezu kwalokho, inkampani "Blackwater" ngamasotsha babebhekwa emigwaqweni New Orleans ngesikhathi kukazamcolo. Ayesehambahamba ukuvimbela kwempahla amaqiniso futhi kuvimbele namanye amacala ngokumelene ukuphila kanye nempahla izakhamuzi ekucindezelekeni.
Le nkampani "Blackwater" wokhela ku izindawo ezishisa kakhulu emhlabeni. Ikakhulukazi, nezigaba zawo e-Iraq uvele cishe ngokushesha ngemva kokuba kokugumbuqelwa Saddam Hussein. Kusukela 2003, ukuvikelwa ukulawula kombuso ikhanda Iraq kaPawulu Bremer lalimisa eyabelwe abasebenzi yenkampani. Kulokhu, isibalo amasosha Blackwater, owaba nengxenye impi yase-Iraq, wenze abantu abangaphezu kuka-10 000.
Ngokusho US abezindaba, ukulahlekelwa Prince Amasosha e-Iraq zaba abantu mayelana 780. Ngokuthakazelisayo, lokhu sibalo akusho usicabangele lapho izibalo ezisemthethweni ukulahlekelwa lempi. Yiqiniso, wayelapho Bush, okuyinto vele uye bagxekwa inani elikhulu labantu ababulawa e-Iraq. Ngaphezu kwalokho, Blackwater Amasosha ubugebengu musa ukuwela isigaba impi.
Ukugxekwa inkampani "Blackwater"
Nakuba u-Erik Prince, inkampani yangasese lempi okwakukhona ngomunye wabokuqala ensimini yayo, uye njalo wayethi eduze imibono zobuntu, kodwa Blackwater uye walungiselela ngokuphindaphindiwe esikhungweni amahlazo. Esinye isenzakalo esinjalo kwaba ukubhuqwa ngesikhathi Nisour Square e-September 2007. Khona-ke abasebenzi inkampani esevulela ngenhlamvu ebhekise kubanikazi isikwele e Baghdad, i ophithizelayo, kwashona 17 abantu abangekho empini-Iraqi kwalimala sina abanye 20.
"Blackwater" ukugxekwa inhlangano baqhubeka emuva kokuthi uMengameli waseMelika uBarack Obama uthatha izintambo ngo-2008. Lapho kuxoxwa, Prince ukuthi iningi ulwazi engakhi lalikhona ngaye kanye nenkampani yakhe, kuye kwahlotshaniswa inqubomgomo. Ngokusho kwakhe, nakuba yena wazinikela kanye nenkampani yakhe nokulahla CIA ngesikhathi lapho izinqubomgomo kushintshiwe, wanquma ukuba 'uphonse esitimeleni. "
Noma kunjalo, ngo-2010, Baraka Obamy ekuphathweni iphetha inkampani "Blackwater" inkontileka kuwufanele US $ 120 million. Ngaphezu kwalokho, e-CIA wenza Prins oda value amasevisi ku- $ 100 million. Ngemva kweminyaka emithathu, umsunguli "Blackwater" inkampani ahlinzekwa uhulumeni waseLibya ukudala ibutho amasosha kusukela wangaphambili Australian amabutho ezikhethekile ukulawula izifunda empumalanga ye-Australia. Kamuva, i-Prince ezihlongozwayo ukudala e Libya a amasevisi ogwini wangasese ukumiswa ukugeleza ababaleki eYurophu. Kwakucatshangwa ukuthi anakekele izindleko zalo msebenzi kwakufanele European Union kanye Libya. Njengoba isisu Prince, ukuxhaswa ngezimali elalizokwakhiwa lalizoba ngezithukuthuku tibalo ekweletwayo akhawunti ivinjiwe ka Gaddafi. Lezi imibono awazange asekelwe e-European Union kanye atikasetjentiswa.
Kukhona futhi ibika ukuthi ngo-2014, Prince waya Nigeria, lapho okuhlongozwayo eziyizinkulungwane ezingu-1,5 aseMelika ukuqeda inhlangano olukhulu "Boko Haram", kanye ukuvimba zonke iziteshi lokweba uwoyela kuleli zwe. Lezi ziphakamiso nazo awamukelekile.
Trump futhi Erik Prins
Phakathi nezinyanga zokugcina umkhankaso kamongameli, usomabhizinisi asekelwe ikhandidethi Republican Donald Trump. Ngesikhathi esifanayo wayengabhekiseli uphathiswe nganoma yiziphi izabelo olusemthethweni. It is for ethile eyaziwa ukuthi ngo-December 2016-Prince wavakashela ihhovisi New York leqembu inguqulelo Trump e-New York. Ngo-April 2017 kwabikwa ukuthi Trump futhi Erik Prins zinjalo ngokuseduze ajwayelekile, umongameli wamcela ukuba 11 Januwari 2017 umhlangano omele uVladimir Putin sika ku Seychelles. Inhloso kokubonisana lalizoba elucidation yesikhundla waseRussia empikiswaneni nokubambisana ne-Iran. Ukuze ukuhlole lokhu injongo kuvulwe uphenyo, okuyinto olwenziwe yi-CIA.
Njengoba amalungu US ekuphathweni kamongameli, futhi Dmitry Peskov sebekubeke inqatshelwe ekulungiseleleni umhlangano imfihlo. Ngokwakhe Erik Prince, ukuphila kwakhe siqu lapha ngenzansi, benqatshelwa yokuthi iqhaza layo enhlanganweni izingxoxo ngokwethukela. Ngaphezu kwalokho, babonisa ukumangala at yokuthi isevisi intelligence wezwe lakhe kuyinto ukuhlola umatasa izakhamuzi zawo, kunokuba ukuzingelwa amaphekula.
Noma kunjalo, sonke siyazi ukuthi umsunguli inkampani "Blackwater" ezinikelwe ayizinkulungwane 250 zamaRandi ukuze umkhankaso we 45th US President. Ngaphezu kwalokho, emibuthanweni zezombusazwe United States ke Akuyona imfihlo ukuthi umeluleki luka-Trump abaseduze Stiven Bennon futhi Erik Prince - abangane abaseduze, futhi udade zokugcina ngamiswa njengephayona sikaNgqongqoshe weMfundo.
Ibutho Amasosha e-Emirates
Ngo-2011, uhulumeni UAE usayine isivumelwano nenkampani Reflex Izimpendulo, okuyinto lalingesinye brainchild of Blackwater umsunguli. Inkontileka kuhlinzekelwe ibandulo labaSebenzi Amasosha akwamanye amazwe ukuze alwe ubuphekula, abezokuphepha bangaphakathi wase-United Arab Emirates kanye ukucindezelwa olwathatha nemibhikisho e waqasha emakamu okufukuzwa kuwo.
amasosha Ukuqeqesha akuzona izakhamuzi United Arab Emirates, babehilelekile by abafundisi obhekana nazo. Iningi labasebenzi reflex Izimpendulo, ehilelekile ukuhlinzekwa kwezinsizakalo, ngokuvumelana idokhumenti esayinwe kobuholi United Arab Emirates, babe wangaphambili amabutho ezikhethekile ezivela e-United States, eJalimane, e-UK French Foreign ngizodedelwa.
Okusanda kwamenyezelwa ukuthi Erik Prins (Erik Prince) ubonisa nebutho lakhe eyimfihlo-United Arab Emirates. Amasosha lakhe bathunyelwa US i-70 izindiza. Kukhona ulwazi umongameli Trump ngaleyo ndlela wanquma ukunikeza ngokwayo nge Esizwa amabutho akhe siqu, okuyinto imali ngomumo ukuba abulale noma imuphi umyalelo.
Ekuqaleni kuka-May 2017, amaphephandaba amaningi intanethi emhlabeni wonke ukusakaza ulwazi uhulumeni of China ukumemele umphathi wangaphambili we Blackwater ukuba aqaphe Omkhulu Silk Road. Okwamanje, u-Erik Prince iyinhloko-Hong Kong ezisekelwe Frontier Services Group (FSG). Le nkampani ukwakha izisekelo ezimbili nokusebenza ku ntshonalanga yeChina - Yunnan futhi Xinjiang. Lapho exoxa ne-Financial Times Erik Prins (Blackwater okwamanje awusebenzi usunayo) Wachaza ukuthi FSG - lokhu akukona kwezempi kodwa inkampani Logistics kabani imisebenzi okuhloswe ngayo ukugqugquzela China for "ukunwetshwa yokuhweba." Ngesikhathi esifanayo, waphawula ukuthi sokuvikela yenqubo Logistics. Kulokhu, Prince wagcizelela ukuthi abasebenzi yakhe ayiwona ahlomile, kodwa akuyona ukuphepha umsebenzi.
Impumelelo oyinhloko lapho kuze kube yilolu suku uyaziqhenya Erik Prince, - Blackwater - omunye wamabutho lokuqala commercial emhlabeni. Ngaphezu kwalokho, kuyinto umsunguli nezinye izinkampani, ukuqapha imisebenzi ayelayo ukuba sendleleni njalo. Naphezu kwakho konke lokhu, wayekade ngokuphindaphindiwe ube ubaba washada kabili.
Unkosikazi wokuqala kukasomabhizinisi zangaphambili "ulwandle ingonyama" - UJoan - wabulawa umdlavuza ngo-2003. Nakuba egula, ePrince wathandana ngophethe izingane zabo ezine, Dzhoannoy Houk. Ukuze credit yayo, Eric kumele asho ukuthi ungumsebenzi wayezikhandla nemali ukubeka umkakhe ezinyaweni zakhe. Nokho, naphezu kwayo yonke imizamo yayiyize.
Ngemva konyaka ukufa iyisithandwa ngishade Eric Hawk, okuyinto Sekuyisikhathi eside athwala lonke umtfwalo wekunakekela kanye nemfundo yezingane yakhe endala. umshado wesibili ngesikhathi Prince wazalwa izingane ezintathu ngaphezulu. ingane yakhe encane, Charles Donovan ukuthi ogama lakhe behlonipha uWilliam Wild Bill Donovan.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi ngubani Erik Prince. Umsebenzi lo muntu ugcwele wezimfihlakalo, eziningi zazo kungenzeka emashumini amaningi ngokwengeziwe kube imfihlakalo. Prins akuyona ngisho 50, futhi isifiso sakhe kanye nekhono bafinyelele imigomo yabo eside kusukela baba nesifenqo. Ngakho-ke, kungenzeka kakhulu eminyakeni ezayo, igama zangaphambili "Mosca ikati" ngokuphindaphindiwe spotlight of abezindaba ezweni.
Biography Denisa Matrosova. Umsebenzi umdlali ukuphila siqu futhi amaqiniso athakazelisayo
Imodeli Solow ukukhula: umqondo, umsebenzi
Egwema - kuyinto iyisicefe izinkondlo, nephrozi nomculo. Izibonelo izincwadi